New York:-Duufaantii Sandy ee ku dhufatay xeebaha bari ee Maraykanka ayaa dishay ugu yaraan 14 qof, sidoo kalena dhalisay daadad badan oo ku fatahay magaallooyin ay ka mid tahay New York.
Ugu yaraan 16 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen New Jersey, New York, Maryland, North Carolina, Galbeedka Virginia, Pennsylvania iyo Connecticut, dhimashada badankeeda waxaa sababay, geedo soo dhacay iyo shilal baabuur.
Qasaaraha maaliyadeed ee duufaantan ka dhashay ayaa lagu qiyaasayaa malaayiin dollar. Ubucda dabeyshan ayaa soo gaartay dhulka barriga ah xalay, gaar ahaan Gobolka New Jersey.
Weli waxaa xiran garoomada dayuuradaha oo kumanaan duulimaad la baajiyay . Malaayiin qof ayaa sidoo kale duufaantu ku qasabtay inay shaqooyinka ka joogaan. Dhinaca siyaasadda marka la eego duufaantu waxey saameysay ololihii doorashada Madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka.
Inkastoo duufantu ay ka gudubtay inta badan magaalooyinka gobolada bari ee mareykanka ayaa weli waxaa laga dareemayaa saameyntii ay reebtay.VOA